Zimbaboe: Manova ny Fiainan’ny Tanora Amin’ny Alalan’ny Teatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2011 7:45 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Aymara, русский, Italiano, 简体中文, 繁體中文, polski, Deutsch, Ελληνικά, English
27 taona i Boyce Chaka, poety sy mpianatra teatra ao Bulawayo, tanàna lehibe faharoa ao Zimbabwe. Nanomboka tamin'ny taona lasa, nanokana ny fotoanany tamin'ny fampianarana ny mpianatra ambaratonga faharoa momba ny sanganasan'i Shakespeare sy ny tononkalo araka izay nambarany fa andrana ny hoe “hanala azy ireo eny an-dalambe [hidonanam-poana].”
Amin'ireo taranja hafa mifanindran-dalana amin'ny taranjam-pianarana, lasa fanaon'i Chaka ny mitari-dalana ny tanora mpianatra ambaratonga faharoa hilalao an-tsehatra sy hikalo poezia mba hamenoana izay lazainy ho ora tsy misy fampianarana .
Io no fomba ataony hahazoan'ny ankizy ny “tontolo mahafinaritra an'i Shakespeare” sy handrisihany azy ireo hamaky teny ao anatin'ny vanim-potoana ahiana fa tsy misy fanolokoloana ny tanora hamaky teny any Zimbabwe.
Hoy i Chaka:
Misy ny tantara azo ampifandraisina tsara amin'ny “pulp fiction” ao. Misy zavatra azo ianarana foana amin'ny Shakespeare ary raha mandrisika ireo tanora ireo hahafehy ny lahatsoratra dieny mbola kely aho dia mahatonga azy ireo ho tonga haingana any amin'ny tanjona tratrariny izany. Ohatra, maro ireo milaza fa te ho lasa mpisolovava, ary ao Zimbaboe, mba hanekena anao hiditra hianatra ny taranja lalàna any amin'ny Anjerimanontolo, dia tsy maintsy nahomby tsara tamin'ny fitsapana literatiora teny Anglisy ianao. Izany indrindra no antony anaovako izao zavatra izao. Mampianatra amin'ny sekoly maro ao an-tanàna [Bulawayo] aho ary tsara ny vokatra. Tsy noho ny fahaizana ny sangan'asan'i Shakespeare ihany fa mampianatranolotra fampianarana teatra any am-painarana ihany koa aho.
Nilaza tamiko i Chaka fa te hampifandray ny “teatran'ny arabe ao an- tanàna” amin'ny tantara an-tsehatr'i Shakespeare izy ary nasehony ny anatra azon'ny ankizy avy amin'ny toerana samihafa traikefa isaky ny miova sehatra. Avy amin'izany fitiavana izany no hametrahany ny kinasany amin'ny fananganana bemirain-kolontsaina manankarena ao Bulawayo, izay efa ankalazaina ho fihaonan-dalan-kolontsain'i Zimbamboe.
Mpivarotra ao Venice? Tsena Sabotsy maraina ao amin'ny lapan'ny tanàna. Sary avy amin'i Sokwanele ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA)
Mifototra amin'ny finiavany handray anjara biriky hampisy tsy amin'ny fananan-kolontsaim-pamakianteny eo amin'ny tanora mpianatra lahy sy vavy irery ihany, fa hanokatra indrindra ny mason'izy ireo hahita sehatr'asa hafa azo atao. Ny Tanora Zimbaboena no vondrom-ponina maro indrindra ao Zimbaboe, ary ety ny tsirim-panantenana hihariana amin'ireo niala ny sekoly.
Nilaza i Chaka fa te hitarika ireo tanora amin'ny asa hafa azony atao aorian'ny fialany ny sekoly. “Mino fa raha tena matotra tokoa izy ireo amin'izany, dia mety ho lasa mpanao teatra matihanina satria mampahazo laza manerana ny firenena ny teatra,” hoy i Chaka.
"Inona no hita anatin'ny anarana?Izay antsointsika hoe rose, na anarana hafa aza, mba manana fofona malefaka tahak'izany ve" (Romeo sy Juliette) Voninkazo ao amin'ny firenen'i Zimbaboe, Gloriosa Superba, ao Bulawayo. Sary avy amin'i Botser tao amin'ny Flickr (CC BY-SA)
Nasaina hampianatra literatiora ho an'ny mpianatra ambaratonga ambony eny anivon'ny oniversite ihany koa i Chaka ary nilaza fa mahafinaritra tokoa ny mahafantatra fa noraisina am-pahamatorana izay rehetra nataony. “Hampianatra literatiora sy teatra amin'ny mpianatra ambaratonga ambony sasantsasany aho ho toy ny taranja fanampiny ataon'izy ireo ary zavatra iray niriako atao hatry ny ela izany,” hoy izy.
Satria efa hananika ny 7 miliara ny isan'ny mponina manerantany, ary ny vaovao mahamatroka hatrany no ventesin'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena, ny olompirenen'izao tontolo izao tahaka an'i Chaka no hanome dika hafa hanaovana azy ho toerana tsaratsara kokoa sy hanatsara tsikelikely amin'ny zavatra bitika nefa misy lanjany vitany.
Mozambika 24 ora izay